Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): September 2013
You will exactly see how the Kachin people love our Kachin Independence Organization (KIO) as our lives ..
at 9/30/2013 07:00:00 AM
You will exactly see how the Kachin people love our Kachin Independence Organization (KIO) as our lives .... ကချင်လူထုတွေဘယ်လောက်ကိုယ့်အမျိုးကိုချစ်သလဲဆိုတာ လှုပ်ရှားမှုအသေးစိတ်ကိုဒီမှာတွေ့
ရမှာဖြစ်ပါတယ်.... ( Jinghpaw myu sha niateng tinang amyu mungdanantsa kade daram tsaw ra nga ai... KIO ni hpe kade daram tsaw ra ai ngu ai hpe ndai shamu shamawt lam hpe atsawm yu yu ga )
at 9/30/2013 04:09:00 AM
Posted by nzk Sunday, September 29, 2013
NZ Mungdan Auckland mare hta shanu nga ai shayi Chang Myaw kawn
Bachelor of Business (finance) janmau hpe gup la lu sai lam na chye lu ai hte anhte NZ J.W myu sha ni yawng mung arawng la hkung ga sha grau dat ga ai.
at 9/30/2013 04:04:00 AM
VOICE OF Dr. SAI HTWE, LA JA MYITUNG AND MARTUE HPAUDA (1)
မြန်မာပြည်ကြီး မတိုးတက်တာ ဟိုဟာကြောင့် ဒီဟာကြောင့်ဆိုပြီးလူအများက ပြောထွက်ကြသလို ငါလည်းပြောကြည့်တာပေါ့
at 9/30/2013 03:55:00 AM
နိုင်ငံတိုင်းမှာ လူမျိုးကြီးတွေက နိုင်ငံတော်ကို ထ်ိန်းသိမ်းကြသည် တရုတ်နိုင်ငံကို တရုတ်က ထိန်းသည် မလေးရှားနိုင်ငံကို မလေးလူမျိုးတွေက ထိန်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံကို ထိုင်းလူမျိုးတွေက ထိန်းကြသည် မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ်သူက ထိန်းသလဲ ခတ်တာက မြန်မာဆိုတာ လူမျိုးကြီးတွေ အမည်မဟုတ်ဘူး လို့ငြင်းပယ်ကာ တိုင်းရင်းသား ၈မျိုးအမည်ဖြစ်သတဲ့
အမှန်တော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဗမာတွေကထိန်သိမ်းရမှာဖြစ်ပေမယ့် ဗမာတွေက မထိန်သိမ်းပဲ ပျိုကွဲအောင်လုပ်တယ် china, chines လို့သုံးသလို Burma, Burmese ဟုသုံးနှုန်းပြီး တိုင်းပြည်မပျိုကွဲအောင် ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်
ဒါပေမယ့်ပြသနာက china လို့အမည်တပ်ခေါ်တာ Chinese တွေအတွက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ပေမယ့် Burma လို့ အမည်တပ်ခေါ်ရင် Burmese တွေအတွက် ဘာတစ်ခုမှ ဂုဏ်ယူစရာမရှိပဲ သိက္ခကျစရာ တစ်ပုံကြီးဖြစ်နေတယ်
နားမလည်မှာစိုးလို့ ထပ်ရှင်းပြအုံးမယ် ဗမာပြည်သားအများပြားရှိတဲ့ မလေးရှားကို ကြည့်ပါ ပိန်နန်းဆိုတာ တရုတ်တွေ အများပြားနေထိုင်ပြီး ခွဲထွက်ခွင့်တောင်းတယ် မလေးလူမျိုးနဲ့ အစိုးရက သဘောမတူဘူး ဆာဘားပြည်နယ်ကို ဆာဘားလူမျိုးတွေက ခွဲထွက်ခွင့်တောင်းတယ် မလေးလူမျိူးတွေက သဘောမတူဘူး ဒါပေမယ့် သူတို့နဲ့ စည်းလုံးရေး မပျိုကွဲအောင် မလေးလူမျိုးနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေ အမြဲကာကွယ်တယ် တန်းတူအခွင့်အရေးပေးပြီး သူတို့ပြည်နယ်ဆင်းရေးမသွားအောင် အမြဲကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပေးတယ် သဘောထားကွဲလွဲမှု့ကြားက စစ်ပွဲမဖြစ်လာအောင် အမြဲဂရုစိုက်တယ်
ကချင်ပြည်နယ် ခွဲထွက်မယ်ဆိုရင် ကချင်လူမျိုးအလုံးသဘောတူတယ် ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကရင် ဘယ်သူမှ ကန်းကွက်မှာ မဟုတ်ဘူး ဒါပေမယ့် ဗမာနဲ့ အစိုးရ တွေ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ သဘောတူမှာ မဟုတ်ဘူး ဘာကြောင့်လဲ မိတ်ဆွေသိသလား ဗမာတွေက သူနဲ့ ဘာသာမတူ လူမျိုးမတူညီတဲ့ တိုင်းရင်းသားကို ပေါင်းချင်တာမဟုတ်ဘူး ဒါပေမယ့် သူပေါင်းချင်တာက နယ်မြေ
ခေတ်အဆက်ဆက် ဗမာနဲ့ သူတို့ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အစည်းကို ကြည့်လိုက်တော့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ထိန်းသိမ်းဖို့ မလုပ်ပဲ လွှတ်လပ်ရေးရတာနဲ့ နေရာဝင်သိမ်းလိုက်ပြီး တိုင်းရင်းသားများ သဘောတူညီထားတဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ကို ဖြတ်သိမ်းကာတိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးရေးကို ကွဲအောင်လုပ်ခဲ့ကြသည်
အဲဒီလိုသဘောထားကွဲလွဲမှု့ကတစ်ဆင့် စစ်ပွဲတွေစတင်လာကာ ဟိုအဖွဲ့ကို ချဉ်းကပ် ဒီအဖွဲ့ကို တိုက် တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းရန်တိုက်ပေး ဗမာနာမည်တပ်ရင် သိက္ခကျတယ်ထင်ကာ ဟိုဟာတပ်ဆင် ဒီဟာတပ်ဆင် ဟိုဟာလုပ် ဒီဟာကွဲ ဒီဟာလုပ်ဟိုဟာကွဲ နှောက်ဆုံးငါရှင်းရှင်းပဲမေးမယ် မင်းတို့ဗမာတွေ မရှက်ဘူးလား............
— with Ah Hpu and3others.
Lachid Kachin, Manaw Citizen, Tsaw Myit N Hkru and3others like this.
WP LS ကျတော်က နိုင်ငံရေးအကြောင်းသိပ်မပြောချင်ပေမယ့် ဒင်းတို့လုပ်ရပ်တွေကို စောင့်ကြည့်လာတာကြာပြီ လွန်လွန်လို့ ပြောရတော့မယ်
WP LS ဘာသာရေးဘက်မှာဆိုရင် ဝိရသူတဲ့ ကြည့်ရတာ ဗမာလူမျိုးထဲကနဲ့ ဒုတိယ ဘုရားပွင့်လာတာလားမသိ ကုလားမုန်းတီးေ၇းလုပ်တာကမှ ကမ်းကုန်ပဲ မင်းတို့က လူမျိုးကြီးဘာသားကြီးတွေလဲ ထိန်းသိမ်းရမဲ့သူမဟုတ်လား ဘာဖြစ်လို့ သူများထက်အဆင့်နိမ့်အောင်လုပ်ရပ်တွေ ကျင့်ကြံပြီး ဆူပူကြတာလဲ
WP LS နိုင်ငံတော် အစိုးရတဲ့ တိုင်းရင်းသားများကို ဘိန်းဒမြ ဆပ်ကြေးကောက် ပြည်သူကို ဒုက္ခပေးသောအဖွဲ့အစည်းဟု သတင်းများလွှင့်တင်ကာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကြား အမြင်လွဲမှာမှု့တွေ စိုက်ထူကာ ကွဲသထက်ကွဲအောင် လုပ်နေကြတာလား
WP LS မင်းတို့ ဗမာတွေ မြန်မာဆိုပြီး တိုင်းရင်းသား နာမည် ၇မျိုးကို ကောက်တပ်ထားပြီး သောက်ယမ်းတာအားမယမ်းကြရင်ကောင်းတယ် ငါတို့က ဗမာကို ဆက်ပေါင်းဖို့ စ်ိတ်ပြတ်နေပြီးဆိုတဲ့ အကြောင်းကို အသိပေးချင်ပါတယ်
Guns, Briefcases and Inequality: The Neglected War in Kachin State"
at 9/30/2013 03:47:00 AM
By Burma Partnership | September 21, 2013 The peace process in Burma is almost two years old yet despite the initial optimism overaseries of initial ceasefires signed, the situation has largely stagnated over the past 18 months. The ceasefire agreements remain in the earliest stages with their fragility being exposed by regular fighting in Shan State while occasional skirmishes occur in Karen and Mon States. In Kachin State, the conflict has escalated dramatically and there is still no ceasefire agreement between the Burma government and the Kachin Independence Organization (KIO).
++++Read more+++++ click on burmese text-link
Lawan Ladan Masat Shagrin La Ra Ai Lam Kaba Lahkawng
at 9/29/2013 10:58:00 PM
Ndai lai ka ngau hti yu nna myit yu na lam shana dat ai
Hkungga tsawra kamhpa let,
Jinghpaw kasa, Hugawng kachin hte Jinghpaw tingsan blog ni, chye ju hte lawu na attached file hpe mara ya marit, facebook de mung shadu ya marit..
Hkyak hkyak amyu sha ni n myit n mai ai lam lahkawng hpe tang madun dat nngai. KIO ningbaw ni hpang de mung naw shadu ya marit; shanhte hte matut lu ai email nlu ai.
Kam hpa let;
Sara Lagai, Yangon
Ningmu hpe ( hugawngkachin@gmail.com /mrgumzet@gmail.com/jinghpawkasa,jinghpawtingsan,FB sms ) kawebai shana wa marit.
signature..., htu ai poi kaba hta n-sa htu lawm mu ga ngu kyu hpyi nga n-ngai.
at 9/28/2013 12:32:00 PM
Jing Hpaw Wunpawng Myusha ni a-gawng malai rai nga ai.. KIO. KIA. Ningbaw ni Myen woi Awn galaw hkyen nga ai Gap hkat Jahkring ai hte seng ai...,signature..., htu ai poi kaba hta n-sa htu lawm mu ga ngu kyu hpyi nga n-ngai...,a-san sha mu taw nga ai kachyi myi mung n-mai byin ai lam galaw taw nga ai...,
KIO.., KIA.. lama na Gap hlkat jahkring ai hte seng ai.. signature.. sa htu dat yang Kanu Jinghpaw Mung hpe Myen a-lata hta Lai lai kaman ya kau ai hte Jinghpaw Wunpawng Myusha ni hpe Myen a-lata hta Mayam shatai kau dat ai hte maren sha re...,
Myu baw sang.., Ethnic..,ni a- matu a-kyu hpa lachyum n-pru ai Myen shi a-akyu mara matu galaw ai sha re....Kadai lapran Masha Myi sa tai sa tai gara hku n-mai byin ai...,Dai lapran Masha sa tai lawm na Mung dan ni..,Ethnic..,Myu baw sang ni a-matu ra mara Laknak hkum sum hpa shawng sa htaw tawn ya yang gaw.., Myit yu hpa re....,Kara sing gawng langai myi ram pyi n-mai kam ai yaw...,Myen a-hpa chyi...,
Myit san seng ai hte galaw ai rai yang..,Jinghpaw Mung kaw shara jahkrat la da ai Myen ni hpe shawng dawm la mu le...,UWSA..,Tsun ai Myen Woi Awn galaw ai ..,signature.. htu poi kaba ngai hte hpa n-seng ai.. grai hkrak ai hpa chyi re...,
Shana ai : Seng Maran (sengging@gmail.com)
at 9/28/2013 02:51:00 AM
Teng Sha Rai Kun Daw 3
at 9/28/2013 02:34:00 AM
Ya hkyak hkyak N Hka Ga mare kaw byin nga ai lam( I am sending verified news of sexual violence case committed by Burmese Army in Nhka Ga of KIO's 1st Brigade area. )
at 9/26/2013 10:59:00 PM
Ya hkyak hkyak N Hka Ga mare kaw byin nga ai lam lu la ai hpe bai matut shalai ya ai re. Salang ni lawan hparan ra nga sai.
I am sending verified news of sexual violence case committed by Burmese Army in Nhka Ga of KIO's 1st Brigade area.
Lalaw: Hpu Conetion n kaja ai majaw G talk hte sha shana dat ai. N hka Ga na Num ma roi rip ai hte seng nna na lu ai made shana dat ai. Hk.L.Y (137) ni Slg A John Seng Awngamadu jan ask (29) ning ram Nhtung Hka Nang Hting ( Ma Chyangai Kanu )hpe re lam na lu. Myen ni mare yong grup kum shara jahkrat nga ai majaw shiga lu la na yak mat ai. mare masha ni kadai n lu pru hkom mat ai. Myen Du hpe Du tawk ya ai shi ga hte seng nna shan hte KIO hpe mying jahten mayu nna da sang shan hte hkrai galaw nna shiga shamong ai she re.
(Translation) Lalaw: Brother, notagood connection therefore I am sending from G Talk. I am informing youasexual violence case from Nhka Ga village. Burmese Army battalion Hka.La.Ya (137) have committed sexual violence against Ms.Nhtung Hka Nang Hting (have infant baby) aged 29,awife of Mr. A John Seng Awng. We have difficult gather news because Burmese troops occupied and stationed around in the village. The villagers are restricted to go outside of their village. It was their (Burmese Government) intention forasmear campaign against the KIO regarding news of Burmese captain was beheaded and spreading propaganda.
Lalaw: Slg Yung Hka Hkyen hte Slg La Hkren Hkaw tup yan hpe mung zingri sat kau sai lam na lu ai.
(Translation) Lalaw: We heard that Burmese army have tortured and killed Mr. Yung Hka Hkyen and Mr. La Hkren Hkaw Tup. (Note: Please link this news with our previous update)
When they become available online (Satellite Internet) they leaveamessage. I know you may want to contact my source to verify news, but no telephone or Internet connection in that remote region of KIO 1st Brigade area.
By : Putao masha
အောက်တိုဘာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးပွဲတွင် အဖွဲ့အားလုံး မပါဝင်ပါက အပစ်ရပ်ပြီးသည့် အဖွဲ့များပါ ပါဝင်ဖွယ် မရှိဟုဆို
at 9/26/2013 08:40:00 PM
တောင်ကြီးမြို့တွင် သုံးရက်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လာသူများ
လာမည့် အောက်တိုဘာလအတွင်း ပြုလုပ်မည်ဟု အစိုးရဘက်က ပြောကြားနေသော နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခ တ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များအားလုံး မပါဝင်ပါက အပစ်ရပ်ပြီးသည့် အဖွဲ့များလည်း ပါဝင်လက်မှတ် ရေးထိုးဖွယ် မရှိကြောင်း တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များက ပြောကြားသည်။
read more++click on link++++++++
မြန်မာ့တပ်မတော်အတွင်း ဇနီး မိသားစုဝင်များ၏ စွက်ဖက်မှုများ - အပိုင်း (၁+၂+၃)
at 9/26/2013 08:20:00 PM
တရုတ် ဆေးဝါးတွေကစိတ်မချရဘူး၊ သူတို့ နိုင်ငံမှ မစမ်းသပ်ရဲတာတွေကို မြန်မာပြည်ပို့ပြီး ဆေး အစွမ်းကို စမ်းသပ်တာ ။
at 9/26/2013 08:13:00 PM
အခုပဲ တယ်လီဖုန်းဆက် စကားပြောနေသံ တခု ကြားရတယ်။
ပြည်ပ က သားက လှမ်းမေးတာကို မြန်မာပြည်မှ အမေ က ဖြေနေတာ။
သူတို့ လာတိုက်တာ။ မသောက် မနေရ လို့တော့ ပြောတာပဲ။
အဲ့ ဆေးတွေ သောက်မိလိုက်လား။
အမေ မသောက်ဘူး ဘယ်သူ့ကိုမှ လည်း မတိုက်ဘူး
အဲဒါ စီမံချက်နဲ့ လာတိုက်တာ ဆိုပေမယ့် မသောက်ရဲဘူး။
တရုတ် ဆေးဝါးတွေကစိတ်မချရဘူး၊ သူတို့ နိုင်ငံမှ မစမ်းသပ်ရဲတာတွေကို မြန်မာပြည်ပို့ပြီး ဆေး အစွမ်းကို စမ်းသပ်တာ ။ ကာကွယ်ဆေး ဆိုပေမယ့် စိတ်မချဘူး၊ တကယ့် အစိုးရ ဌာန တွေကရော ဒီဆေးတွေ ဘယ်လောက် အစွမ်းထက် အာမခံ သလဲ ဆိုတာ စမ်းသပ်ပြီးပြီမို့လား။
တရုတ်ဆေးတွေ တရုတ် အစာတွေ တရုတ် နည်းပညာတွေ အမေတို့ မယုံတော့ဘူး သားရေ။
ကျနော်လည်း စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ နားထောင်နေမိတယ်။
အစစ အရာရာ သတိထားမှ တော်ကာကျမယ်ဗျ နော့
at 9/26/2013 08:02:00 PM
မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းက ဒေသခံများ အခက်အခဲ ...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က သူ့လက်ထက်မှာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ရပ်တန့်ထားမယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရွှေ့ပြောင်းခံထားရတဲ့ ဒေသခံတွေကတော့ နေရပ်ရင်း ပြန်ခွင့် မရကြသေးပါဘူး။ နေရာသစ်မှာ ရွှေ့ပြောင်းခံ ဒေသခံတွေ အဆင်ပြေကြပါသလား ဆိုတာ တိုင်းရင်း ရှုထောင့်က တင်ပြထားပါတယ်။ —
By Jade land
at 9/26/2013 08:00:00 PM
ဘားမားကန်ပိန်း မန်နေဂျာ (ဇိုယာဖန်) က အခုလိုပြောပါတယ်--
“ တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ ဒေသမှာ လိင်အကြမ်းဖက်မှုကိစ္စတွေကို ရပ်ပစ်ရပါမယ်၊၊
သိန်းစိန်က ဒီကိစ္စကို ငြင်းနေမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာက ပါဝင်တားဆီးပေး
ရပါမယ်၊၊ တိုင်းရင်းသား အမျိုးသမီးတွေဟာ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဗမာစစ်တပ်
မုဒိမ်းကျင့်ခံရမှာကို ကြောက်နေရတဲ့ အဖြစ်မျိုးပါ၊၊ တရားမျှတမှုဟာ သိပ်
ဝေးနေသေးတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်တစ်ခု သာသာပါ
The government of Burma has not as yet signedanew UN declaration of commitment to end sexual violence in conflict despite continuous calls by local and international communities.
Zoya Phan, Campaigns Manager at Burma Campaign UK, said: "The use of rape and sexual violence in conflict in Burma must be stopped. If Thein Sein refuses to co-operate, then international legal action should be taken to prevent these crimes. For many ethnic women, rape by Burmese Army soldiers isadaily fear, and justice seems to be justadistant dream."
At the event, Mr. Hague said: "This isamilestone towards shattering impunity for those who commit horrific sexual crimes during times of war."
at 9/26/2013 12:02:00 PM
ကြက်ဆူပင် စိုက်ပျိုးရေး စီမံကိန်းအား ခရိုနီကြီးတေဇ နှင့် ယခု အများခေါ်နေကြသော ဗကပ အောင်သောင်းတို့ က စလိုက်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ ၂၀၀၄ ခုနှစ် အမေရိကန် ဒီမိုကရရေစီထွန်းကားရေးဟုဆိုသော သမ္မတ ဘုရှ်၏ ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် စတင်လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်စပြီး ၀င်လာမစဲတသဲသဲဖြစ်နေသော ရတနာ နှင့် ရဲတခွန် ဂစ်ပိုက်လိုင်းများမှ အကြီးကျယ်ရရှိသော ဘီလီများအား စင်္ကာပူတွင်ရှိသော DBS Group Holdings and Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC အလုံးအရင်းဖြင့် အပ်နှံထားခဲ့ကြရာမှ ငွေအင်အား အတော်ပင်ကြီးမားလာပြီး စိတ်မချမှုများဖြစ်လာသောအခါ လူယုံတော် တေဇ၏ စင်္ကာပူအခြေစိုက် စီးပွားရေး အုပ်စုမှ တောင်အမေရိက အာဂျင်တီးနားတွင် အခြေစိုက်သော နိုင်ငံတကာ အပမ်းဖြေ အပျော်စီးသဘောင်္ကုမ္မဏီ ၂ခုအားသွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးအစုရှယ်ယာ များဝယ်ယူပြီး ကြီးမားသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ကိုင်ကြရန်သွားရောက်ခဲ့ကြပြီး တောင်အမေရိက တိုက်နိုင်ငံ တချို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြပြီး ကြက်ဆူပင် ဇာတ်လမ်းပါလာခဲ့ကြသည်။
"Total and Chevron's Yadana gas project has generated 4.83 billion dollars for the Burmese regime," one of the reports said, adding that the figures for the period 2000-2008 were the first ever detailed account of the revenues. ဆိုပြီး အေအက်ခ်ပီကရေးပါတယ်။
အပျော်စီး သဘောင်္လုပ်ငန်းက သိပ်စိတ်မချရလို့ဆိုပြီး တောင်အမေရိကားက ကြက်ဆူပင်ကနေ ဒီဇယ်တွေ လောင်စာတွေထုတ်ဖို့ လေ့လာလိုက်ခဲ့ကြပြီး ဗိုလ် သန်းရွှေကို သံတော်ဦးတင်ကြပါသသည်။ ဦးအောင်သောင်းက သက်တော်ရှည် အမတ်ကြီးလိုလုပ်ပြီး ယာတြာနဲ့ပါထောက်ပြလို့ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ ကြက်ဆူစီမံကိန်းအား လှည်နေလှေအောက် မြင်စောင်းမကျန် စိုက်ဖို့ စီမံကိန်းချလိုက်ကြတာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀ လောက်ကို တရုတ်က နေ ချေးပြီး လုပ်ကြပါသတဲ့ အဲဒါကို The Myanmar Time ကခုလိုရေးထားပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ တရုတ်က အကြွေး အမေ၇ိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀ ကို လျော်ပေးမယ်ပြောပြီး မြန်မာပြည်အနှံ ဒီဇယ် မသုံးရပဲ သဘာဝ ရေအားလျပ်စစ် ဆည်ကြီးတွေ ဆောက်ဖို့ မြူခေါ်ပြောဆိုရာနောက်ကို မြန်မာ စစ်အစိုးရ တစုံလုံး ကောက်ကောက်ပါ လိုက်သွားကြပါတော့တယ်။ အချို စီမံကိန်းတွေကတော့ အရင်ထဲကကို ဘယ်သမှမသိအောင် လုပ်ထားတာတွေပါရှိပါတယ်။ အခု အဲဒီဆယ်ကြီးတွေကို အားလုံးမြင်အောင် စာရေးသူ ဖေါ်ကောင် လုပ်ပေးပါရစေ
The Myanmar Ministry of Electric Power (MEPE) signed an agreement with China Power Investment Corporation in May 2007 for the implementation of seven large dams along the Ayeyarwady, Maykha and Malikha Rivers in Kachin State. Collectively the dams will have an installed capacity of 17,259 megawatts (MW). Investment is estimated to be US$3.6 billion. However, in September 2011, President Thein Sein announcedasuspension of the Myitsone Dam as 'the will of the people' due to outstanding environemntal concerns. Construction of the Dam began in 2009 and projected revenue generated by the dam was estimated to range between $558-597millionayear. China has said if the Dam is cancelled then Myanmar must pay compensation.
The government signed an MOU with India’s National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) in 2004 to develop the Tamanthi dam on the Chindwin River in western Sagaing Region. A new agreement was signed in 2008, formingajoint venture to develop Tamanthi as well as Shwesayay dams. The dam will be 80 metres high, with an installed capacity of 1200 MW and an annual production of 6685 Gwh. The estimated cost of the Tamanthi dam is $3 billion. Eighty percent of the electricity will go to India, and the rest will power Monywa mining operations. Construction at the dam site began in 2007, but is subject to delays. A detailed project report (master plan) is being prepared by NHPC.
The Myanmar government first announced plans for the Yeywa dam in late 2001. In 2004, MEPE signed an MOU withaconsortium of Chinese companies to build the dam on the Myitnge River in Mandalay Division. It is one of the largest roller-compacted concrete (RCC) dams in the world. The dam is 134 metres high with an installed capacity of 790 MW and an annual production of 3550 Gwh. MEPE signed an agreement withaconsortium created by China International Trust & Investment Co (CITIC) and Sinohydro Corporation in 2004. The overall cost is estimated at $700m. Construction was completed in 2010.
In January 2010, the Chinese state-owned Datang Corporation signed an MOU with the Myanmar government to build three dams in Kayah State, includinga600 MW dam on the mainstream Thanlwin at Ywathit, and two others on its tributaries, the Pawn and Thabet rivers. Ywathit dam will have an installed capacity of 600 MW and investment is estimated to reach $600m.
Myanmar’s Ministry of Electric Power, EGAT, and China’s Sinohydro signed an agreement in 2006 for the joint implementation of the Hatgyi dam on the Thanlwin River in Karen State.
The dam will be 33 metres high, have an installed capacity of 1200 MW and an annual production of 7335 Gwh. The estimated cost of building the Hatgyi dam is $1 billion. Most of the electricity from the dam is intended for sale to Thailand. Thailand is pushing for it to be the first of the dams built on the Thanlwin River. Once built, it will pave the way for the building of the other larger dams. Construction of the Hatgyi dam has begun. Commercial distribution of power was projected to begin in 2013-2014, however, EGAT has announced it will be 2019.
In April 2007, two Chinese companies, Hanergy Holding Group Company and Gold Water Resources Company Limited, signed an MOU with the Myanmar government for the Upper Thanlwin dam in northern Shan State. Installed capacity will be 2400 MW. The two sides signed the memorandum of agreement in Nay Pyi Taw in February 2010. The project is under implementation.
The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) signed an MOU with Myanmar on December 9, 2005 for the development of Weigyi to provide electricity for Thailand. The dam will be 168 metres high and an installed capacity of between 4540 and 5600 MW. Construction costs are estimated at $3 billion. Most of the electricity from the Weigyi dam is intended for sale to Thailand.
The Tasang dam is the biggest of five proposed dams along the Thanlwin River in Eastern Myanmar. In July 1996 Thailand signed an MOU with the Myanmar government. Tasang dam is set to be 228 metres in height, with an installed capacity of 7110 MW and an annual production of 35,446 Gwh. When built it will be the highest dam in Southeast Asia, taller than China’s Three Gorges dam.
Most of the electricity from the Tasang dam is intended for sale to Thailand. The initial estimated cost of the Tasang dam was $6 billion. However the actual costs are likely to be far higher. Initially signed with Thailand’s MDX Group, China Gezhouba Group Co wonacontract for initial dam construction in early 2007. In mid-2008, Sinohydro, China Southern Power Grid Co., and China Three Gorges Project Corporation signed an agreement for the development of the Thanlyin River Basin in Myanmar, including the Tasang dam. Work on the dam has been stalled, and there has been little activity at the dam-site.
In March 2005, MEPE, along with financial and construction support from Chinese companies, completed the Lower Paunglaung dam on the Paunglaung River. The dam is 131 metres in height and an installed capacity of 280 MW. The Upper Paunglaung dam is under construction and is expected to be completed in 2012. The dam will be 103 metres high, with installed capacity of 140 MW and an annual production of 454 Gwh (million kilowatt hours yearly). Both dams provide power for Myanmar’s capital, Nay Pyi Taw.
State-owned China Datang Company has agreements to build two dams on the Dapein River near the China border, involving state-owned Myanmar Electric Power Enterprise. The dams will have an installed capacity of 408 MW. Total cost is reportedly 108 million Yuan. ninety percent of the electricity will be sold to China. Construction of the Debeyin 1 hydropower station began on December 19, 2007 and was completed and started distributing electricity in February 2011. Work continues on Dam 2.
The Dagwin, or Lower Thanlwin dam will serve asapumped storage facility for the upriver Weigyi dam. Dagwin is estimated at 56 meters high, with an installed capacity of 792 MW.
Although the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) has been involved in planning the Dagwin dam since the early 1980s, in April 2008, three companies from
China signedastrategic cooperation agreement.The cost of building the Dagwin dam is estimated at $900m.
ကြိုက်သလောက် ရှယ်နိုင်ကြပါတယ် ၊ အချက်လက် အမှန်များဖြစ်ပါသည်။ အင်ဂွန်ဂျာဝါမှတ်ချက်။ အထက်ပါပရိုဂျက်များတွင် အကြီးမားဆုံးသော ဓါတ်ငွေပိုက်လိုင်းများမပါသေးပါ။ လောလောဆယ် US$ 11 billion အကောင့်မှငွေများသည် ဓါတ်ငွေ့ရောင်းချငွေများဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ညီညွတ်သောအစိုးရဖြစ်လာပြီး၊ ငွေအားလုံးကို အစိုးရပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ပါစေ...
at 9/26/2013 11:52:00 AM
ကချင်တိုင်းရင်းသားများ၏ နိုင်ငံရေးနောက်ခံ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန် (အကျဉ်း) ၂၀၁၁၊ နိုဝင်ဘာ၅ရက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ကချင်ပြည်နယ်...။ မေတ္တာမွန်ဖြင့် ဒေါက်တာမနာမ်တူဂျာ နိဒါန်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီက ဒုတိယကမ္ဘစစ်ကာလ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီကာလ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးကွယ်ကာနောက်လာလ ကေအိုင်အို၊ ကေအိုင်အေပေါ်ထွက်လာခြင်း By_N gun ja wa log
at 9/25/2013 10:17:00 AM
In Myanmar,aWay to Deliver Aid Behind Rebel Lines
at 9/25/2013 07:03:00 AM
By Sushetha Gopallawa
More than 100,000 people are now living in displacement camps in northern Myanmar, driven from their homes by conflict between the Myanmar military and the Kachin Independence Army (KIA). While aboutathird of these individuals are living in government-controlled areas, the vast majority are located in zones controlled by the Kachin Independence Organisation (KIO), the KIA’s political wing.
The government of Myanmar is denying international humanitarian agencies regular access to internally displaced persons (IDPs) living in these non-government controlled areas. In fact, during the last year, only one UN humanitarian aid convoy has reached IDPs in rebel-held areas. Meanwhile, the government itself has failed to provide any aid.
These neglected IDPs lack access to adequate food, water and sanitation, shelter, health care, education, and livelihoods. The lack of employment opportunities and humanitarian assistance in their region is forcing some IDPs to take desperate measures, including trafficking women and girls to China.
The Myanmar government’s failure to respond, and its blocking of international aid, is perpetuating the suffering of tens of thousands of people. Suchamassive gap in humanitarian assistance is not acceptable. Indeed, Kachin State would beahumanitarian disaster right now if not for the lifesaving work of local, community-based organizations (CBOs).
Kachin CBOs face many challenges in obtaining international funding for their humanitarian work. Part of the problem is the limited international presence in Kachin, which leaves bilateral donors without sufficient information to assuage concerns about CBO capacity and politicization. Fortunately, pooled humanitarian funds provideasolution. These funds collect money fromawide range of donor countries, under the management of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), which is responsible for identification and assessment of potential grantees.
Myanmar’s Emergency Relief Fund (ERF) is one good example of how the UN and donors - including Britain's DFID, Sweden's SIDA, and Australia's AusAID - can improve conditions in Kachin rebel-held areas despite the ongoing access restrictions. The conversion of the former Humanitarian Multi-Stakeholder Fund (HMSF) into an ERF provides better mechanisms to identify local strategic priorities and high-impact projects. In 2012, the ERF provided $744,122 to support CBOs working in Kachin State. With this funding, CBOs were able to provide water and sanitation and non-food items to displaced people living in forests, remote camps within rebel-held areas, and other conflict-affected regions.
This money has madeareal difference, and yet CBOs say it does not match the level of need. So far this year, only one project has been funded in Kachin State, and just $525,000 remains in the ERF for the whole of the country –apaltry sum compared with the level of need. OCHA has expressed confidence in the capacity of its Kachin CBO partners, but it cannot fund them due to limited resources.
In Myanmar, where humanitarian access is limited and few donors have offices, pooled funds can effectively deliver money to organizations working on the front line. Thus, it is time for the international donor community to generously support Myanmar’s Emergency Response Fund, as this is one of the best ways to deliver lifesaving aid to over 65,000 people displaced behind rebel lines.
OCHA will soon officially launch the Myanmar ERF, which will make it even more effective. Those donors who prefer not to participate in pooled funds (most notably the United States) should support the work of Kachin CBOs through international aid groups who partner with them. Whichever approach donors choose to pursue, they must act quickly and respond generously.
Tagged as: Myanmar, Humanitarian Response, Asia
- See more at:http://www.refugeesinternational.org/blog/myanmar-chance-deliver-aid-behind-rebel-lines
at 9/24/2013 09:57:00 AM
N-Gun Ja Wa's photo.
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း မဟာမိတ်တွေ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို အောင်နိုင်ရန် မဟာမိတ်အမေရိကန်ဘက်မှ ပါဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့ The American-Kachin Rangers (OSS 101) ဂုဏ်ပြုအထိမ်းအမှတ် အမေရိကန်အရာရှိနှင့် ကချင်ရိန်းဂျား ကြေးရုပ်ကို ယနေ့ ရန်ကုန် အမေရိကန် သံရုံးမှာ တွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်။ အမေရိကန် CIA ရုံးချုပ် လန်ဂလေမှာလည်း အလားတူ ဂုဏ်ပြု အထိမ်းအမှတ်သားများကို ထားရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
The American-Kachin Rangers တွေဟာ ရန်သူ့နယ်မြေ အတွင်းစည်းသို့ ပြောက်ကျားနည်းဖြင့် ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်ပြီး တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်များ၊ နယ်မြေကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခြင်းများကို ကျွမ်းကျင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေ အလွန်အထိနာခဲ့ရတယ်။
အဲဒါကြောင့် The American-Kachin Rangers တပ်ဖွဲ့ဟာ အမေရိကနု် စစ်သမိုင်းမှာ Kill/Loss ratio အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ (Kill/Loss ratio ဆိုတာ မိမိတပ်ကျရှံးမှုထက် ရန်သူတပ်အကျများအောင် လုပ်နိုင်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။)
Life-size statues ofaKachin Ranger andaU.S. officer. It is commemoration of the alliance between the Kachins and the Americans which has lasted from WWII to today. (U.S. embassy compound, Rangoon, Burma)
*(မှတ်ချက်။ ။ ကချင်တွေကြားထဲမှာ ဝမ်းအိုဝမ်း (101) လို့ပဲ အတိုကောက် ခေါ်ကြတယ်)
ကချင်လူငယ်များအား ဘိန်းဖြူရောင်းချသူကို ကေအိုင်အိုအစိုးရမှဖမ်းဆီး
at 9/24/2013 09:41:00 AM
ကချင်ပြည်နယ် အတွင်း ကချင်းကျောင်းသားများနှင့် ကချင်လူငယ်များကို အဓိက ဘိန်းဖြူနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများကို ရောင်းချရန် ဗမာစစ်တပ်မှ တာဝန်ပေးထားခြင်းခံရပြီး လက်တွေ့ရောင်းချနေသော ဘိန်းရောင်းသူတစ်ဦးကို ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များမှ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ကေအိုင်အိုအစိုးရ၏ မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီး နှိပ်နင်းရေး လုပ်ဆောင်ချက်အရ ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၃) လက်အောင် တပ်ရင်း (၂၇) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များသည် တာဝန်သိပြည်သူများ၏ သတင်းပေးချက်အရ ဗန်းမော်ခရိုင် မန်ဝိန်းကျေးရွာတွင် ကချင်လူငယ် လူရွယ်များ၊ ကျောင်းသားများအား ဘိန်းဖြူနှင့် မူယစ်ဆေးဝါးများကို အဓိကရောင်းချပေးသောသူကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဖမ်းဆီးထားသော ဘိန်းရောင်းချသူအား ကေအိုင်အိုအစိုးရမှ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
CCN Channel le Kachin Ton Biaruahnak (Chin subtitle)
at 9/24/2013 07:51:00 AM
CCN Channel le Kachin Ton Biaruahnak (Chin subtitle) www.youtube.com kachin Revolution Day ah CCN nih Kachin kan unau pawl interview kan tuah nak asi.
at 9/24/2013 02:17:00 AM
Ok... here is extremely interesting article fromaMyanmar expert...
Guys, if you want the whole article, drop mealine so that I can share you soon.
It seems that the USA is not betting any more on the ASSK card. The UK isabit more unclear and it might be that they will continue to play Lady’s card while engaging post-military government as well. Whatever, Western democracies do not let any more their Burma policies be shaped by the ASSK. They have now their own geostrategic, diplomatic and economic interests and they do not want any more to have their other interests being captured by the international celebrity status of the ASSK.
West has invested geopolitically and diplomatically and is starting to invest economically so much that there is less and less diplomats and policy-makers who want overwhelming NLD election victory. They are afraid of the instability and uncertainty of the transfer of power. They would prefer much more the clear transition pact and some sort of the coalition arrangement between either Thein Sein and ASSK (first choice), or between ASSK and Shwe Mann. If that turned to be impossible, that West is hoping that benevolent, enlightened semi-authoritarianism is better option, than overwhelming NLD victory.
at 9/24/2013 02:15:00 AM
Nga yak la ai Uma Bum,
Mungkan hpaji hpa nhkum.
Chyoi chye kung zet ai ni gaw yu mat wa;
Nkung nzet ai hte jahkrai gaida ni hkrai ngam taw nga.
Bumyi galaw nna, shakut sha,
Jahpawt kaw nna, shana de du hkra.
Nta madu jan gaw, hpun lit gun let, maba kaye;
Madu wa gaw hpun jum hpai let sanat hpye;
Mare, dinghku, magam sha n-ga,
Gasat gala lit mung la ra ai bai nga,
Magyi ka la ni, laja lana bainam ja;
Buga makawp maga sha n-ga;
Lawu ga shawng lam de du hkra,
Hpyen garum gasat mat wa.
Ya Uma Bum shara ni du yu hkum,
Majan laja tim myu tsaw brang ni masin lum.
Uma Bum atsam galoi n shayawn,
Magyi ka la ni majoi gyawm.
Majan ngut nna Uma Bum de bai nhtang du,
Yu wa manang ni hkum nhkum bai shagu,
Kasha sum pum sum bawakawa ni she nhkum pru.
Ntsun mung nmai tsun mung nrai,
Asak ap nawng sai niadinghku,
N-ji nmu, hkrap ngu hkrap ngoi garu.
Htingbu, hting pyen, ni yawng mau nna matu,
Oh.... jiwoi jiwa nianchyoi nchye ai hka,
Magyi ka niamaw lanyet de ndum shami shang mat wa.
Tinang magam ahkaw ahkang bai lu hkra,
Bum nga Bum pra nang ngai nnga;
Dai ni bai sai maw sai hkyeng hkaw kau ra sahka.
Nga yak la ai Uma Bumakam maka,
Matsan masha jahkrai gaida,
Malu masha nlu sha tim, kadai hpa nnga,
Bum nga masha hpe manu ntawn da.
Law htam galu kaba, gawn hkang tara ningra,
Prat ram ni gaw brun mat wa,
Dinggai dingla ni sha ngam taw nga.
Hpang de Uma Bum sin ma gadai ta?
Uma Bum Nbat
at 9/23/2013 10:25:00 AM
စည်းလုံးချင်းရဲ့ အင်အား ဆိုဒ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ပင်တိုင် ဆောင်းပါးရှင် ဆရာဂါမဏိက မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅ မျိုး နအဖက ကြေညာထားချက် အပေါ်တွင် အချက်အလက် အထောက်အထားများဖြင့် မှားယွင်းနေကြောင်း ထောက်ပြ ရှင်းလင်းထားတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ပေးပို့လာပါတယ်။ ယခုလို ပေးပို့လာတဲ့အတွက် ဆရာဂါမဏိကို ကျွန်တော် ကိုဖိုးတရုတ်မှ အထူး ကျေးဇူးတင် ရှိပါကြောင်းနဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်များအတွက် ဗဟုသုတ ရရှိစေဖို့ ကျွန်တော် ကိုဖိုးတရုတ်က တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျား။
နအဖဟာ အရင်အစိုးရအဆက်ဆက်နဲ့ လမ်းခွဲထွက်လာတာဖြစ်တယ်၊ အရင်အစိုးရတွေထက်သာတယ်လို့ ဝါကြွားနေပေမဲ့ ဦးနုအစိုးရလုပ်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာအေးလှိုဏ်ဂူ၊ နေဝင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာစာ ရေးရာမှာ တစ် ခု-တစ် ယောက် စသဖြင့် သုံးစွဲရေး၊ စောမောင်ထွင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုး၊ ခင်ညွန့်ထွင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာအစ-လူသားအစ ပုံတောင်ပုံညာက ဆိုတဲ့အယူအဆတွေကို ဆက်ကျင့်သုံးနေပါတယ်။ အခုဆောင်းပါးမှာတော့ မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်း သား ၁၃၅ မျိုးတကယ်ရှိမရှိကို ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်သွားပါမယ်။
ပထဆုံး ကချင် လူမျိုးတွေကိုကြည့်ရင် နဝတ-နအဖက ကချင် ၁၂ မျိုး လို့ဖော်ပြထားရာမှာ လူမျိုးတမျိုး ထဲက ဆွေမျိုးစုကွဲ၊ ဘာသာစကားလေယူလေသိမ်းကွဲတွေကို သီးခြားလူမျိုးအဖြစ် ဇွတ်အတင်းပြထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကချင်ဆိုတဲ့နာမယ်နဲ့ လူမျိုးတမျိုး သီးသန့်ပြထားသလို ဂျင်းဖောနာမယ်နဲ့လည်း ပြထားပြန်တယ်။ တကယ်တော့ ကချင်ဆိုတာ အားလုံးကိုခြုံခေါ်တဲ့နာမယ်ဖြစ်မှန်း လူတိုင်းသိပေမဲ့ နအဖဟာ လူမျိုးအရေအတွက် ဖောင်းပွစေ ချင်လွန်းအားကြီးလို့ သီးသန့်လူမျိုးမဟုတ်တာကို အဟုတ်ကြီးလုပ်ထည့်တာဖြစ်တယ်။ နအဖ စာရင်းထဲက ဂေါ်ရီ၊ ခခူ နဲ့ ဒူးလန်းတို့ဟာ ဂျင်းဖောအနွယ်ကွဲတွေသာဖြစ်ပြီး သီးခြားလူမျိုးစုတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ခခူနဲ့ဒူးလန်း ဆိုရင် မျိုးနွယ်ကွဲတခုတည်းကိုဘဲ နာမယ်နှစ်မျိုး ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကချင် ၁၂ မျိုးထဲက တမျိုးအဖြစ်ပြထားတဲ့ တရုမ်းနဲ့ဒလောင် ဆိုတာလည်း ရဝမ် မျိုးကွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နအဖပြောတဲ့ ကချင် ၁၂ မျိုးဟာ လက်တွေ့မှာ ၆ မျိုးဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂျိန်းဖော၊ မရူ၊ ရဝမ်၊ လရှီ၊ အဇီးနှင့် လီဆူးတို့ကို လွှမ်းခြုံခေါ်ဝေါ်သည့် အမည်
၄ ဂျိန်းဖော ၁ ဂျိန်းဖော (ဂေါ်ရီ၊ ခခူ၊ ဒူးလန်းနှင့် အခြား မျိုးနွယ်စုများပါဝင်)
၈ မရူ (လော်ဝေါ်) ၂ မရူ
၉ ရဝမ် ၃ ရဝမ် သို့မဟုတ် နုံး (ဒလောင်၊ တရုမ်းနှင့် အခြား မျိုးနွယ်စုများ ပါဝင်)
၁၀ လရှီ (လချိတ်) ၄ လရှီ
၁၁ အဇီး ၅ အဇီး သို့မဟုတ် ဇိုင်ဝါး
၁၂ လီဆူး ၆ လီဆူး သို့မဟုတ် ယောယင် သို့မဟုတ် လီရှော
၁၂ စုစုပေါင်း ၆ စုစုပေါင်း
နအဖရဲ့ ကယား လူမျိုးစာရင်းထဲမှာ လူမျိုး ၉ မျိုးပြထားတယ်။ ဒီထဲမှာ ဇယိမ်း၊ ကယန်း၊ (ပဒေါင်)၊ ကဲ့ခို၊ ယင်းဘော် ဆိုတဲ့လေးမျိုးဟာ တကယ်တော့ ကယန်း (ပဒေါင်) လူမျိုးရဲ့ အမည်ကွဲတွေ သို့မဟုတ် မျိုးနွယ်ကွဲတွေ သာဖြစ်လို့ နအဖပြောတဲ့ ၉ မျိုးဟာ လက်တွေ့မှာ ၅ မျိုးဘဲဖြစ်သွားပါတယ်။ ဂေဘားလူမျိုး ကတော့ ဘွဲကရင် သို့မဟုတ် ကယားထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
၁ ကယား ၁ ကယား
၃ ကယန်း (ပဒေါင်) ၃ ကယန်း (ပဒေါင်၊ ကဲ့ဒို၊ ယင်းဘော်၊ ဇယိမ်းတို့ ပါဝင်)
၆ ဘရဲ့ (ကယော) ၃ ကယော
၇ မနုမနော ၄ မနုမနော
၈ ယင်းတလဲ ၅ ယင်းတလဲ
၉ စုစုပေါင်း ၅ စုစုပေါင်း
နအဖရဲ့ကရင် လူမျိုး ၁၁ မျိုးစာရင်းဟာလည်း လူမျိုးတမျိုးထဲရဲ့ နာမယ်ကွဲတွေ၊ မျိုးနွယ်စုကွဲတွေကို သီးခြား လူမျိုးတွေအဖြစ် ဖန်တီးထားတယ်။ အားလုံးကိုလွှမ်းခြုံခေါ်တဲ့ ကရင်လူမျိုး ကသတ်သတ်၊ စကော ပိုး ဘွဲ စတဲ့လူမျိုး ကသတ်သတ်လုပ်ထားတာ အင်မတန်ရယ်စရာကောင်းပါတယ်။ လူမျိုးတွေဖောင်းပွစေချင်လွန်းလို့ ကြံမိကြံရာ လုပ်လိုက်တာ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရ အရည်အချင်းမဲ့မှုကို ပြတာလည်းဖြစ်သွားတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က လူမျိုးနာမယ်တောင် အမှန်အတိုင်းမသိဘဲ အစိုးရလုပ်နေရသလား၊ ဒါလောက်လေးမှ မသိဘူးလားလို့ အများမေးငေါ့ စရာ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ ကရင်လူမျိုးဟာ ၃ မျိုးဘဲရှိပါတယ်။ ပကူး၊ တလှေပွား၊ မောနေပွား ဆိုတာတွေဟာ စကော ကရင် မျိုးနွယ်ကွဲတွေဖြစ်သလို ကရင်ဖြူ၊ ပလေကီး ကတော့ ဘွဲကရင်ရဲ့ အမည်ကွဲနဲ့ မျိုးနွယ်ကွဲသာဖြစ်ပါတယ်။ မိုးပွား နဲ့ မွန်ကရင်ဆိုတာ ပိုးကရင်ဖြစ်ပြီး စာဖြူကရင်ဆိုတာကတော့ လူမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲ ခရစ်ယန်ဘာသာ ဝင်တွေကို ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် နအဖရဲ့ ကလိမ်ကကျစ်လုပ်မှုကို ထင်ရှားနေစေပါတယ်။
ကယား၊ ကယန်းလူမျိုးများဟာ ရင်းမြစ်အားဖြင့် ဘွဲကရင်လူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ မျက်မှောက်ကာလမှာတော့ သီးခြား လူမျိုးတွေအဖြစ် ရပ်တည်သွားကြပါပြီ။ ကယားလူမျိုးထဲထည့်ထားတဲ့ ဂေဘားလူမျိုးကလည်း ဘွဲကရင်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ သီးခြားလူမျိုးအမှတ်အသားလက္ခဏာ ခံယူတဲ့အနေအထားမရှိသေးဘဲ ဘွဲကရင်မျိုးနွယ်ကွဲ အမှတ်အသားလက္ခဏာ ကိုသာ ခံယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ပအိုဝ်းလူမျိုးကတော့ နဂိုမူလရင်းမြစ်အားဖြင့် ပိုးကရင် ဖြစ်ပေမဲ့ အခုတော့ သီးခြားလူမျိုး လက္ခဏာ ခံယူထားပြီဖြစ်တယ်။
စကော၊ ပိုးနှင့် ဘွဲတို့ကို ခြုံ၍ ခေါ်သော အမည်
ဘွဲကရင်မျိုးနွယ်စု သို့မဟုတ် အမည်ကွဲ
၄ မွန်ကရင် (စာဖြူ)
ပိုးကရင်အမည်ကွဲ၊ စာဖြူဆိုသည်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ကို ဆိုလို
၅ စကော ၁ စကော (ပကူး၊ တလှေပွား၊ မောနေပွားနှင့် အခြား မျိုးနွယ်စုများ ပါဝင်)
စကောကရင်မျိုးနွယ်စု သို့မဟုတ် အမည်ကွဲ
၈ ဘွဲ ၂ ဘွဲ (ကရင်ဖြူ၊ ပလေကီး၊ ဂေဘားနှင့် အခြား မျိုးနွယ်စုများ ပါဝင်)
၁၁ ရှူး (ပိုး) ၃ ပိုး (မိုးပွား၊ မွန်ကရင်နှင့် အခြား မျိုးနွယ်စုများ ပါဝင်)
၁၁ စုစုပေါင်း ၃ စုစုပေါင်း
နအဖစာရင်းထဲမှာ အဆိုးဆုံးကတော့ ချင်း လူမျိုး ၅၃ မျိုးပြထားတာပါဘဲ။ ထုံးစံအတိုင်း ချင်း ဆိုတဲ့နာမယ် နဲ့ လူမျိုးတမျိုးလည်းပြထားပါသေးတယ်။ ၅၃ မျိုးထဲမှာ ချင်းလူမျိုးအဖြစ် အမှတ်အသားလက္ခဏာ identity မသတ် မှတ်နိုင်တဲ့ နာဂ၊ မဏိပူရနွယ်ဘွားကသည်း နဲ့ နီပေါနွယ်ဘွားလင်းဘု ကိုလည်းထည့်ထားတယ်။ ဒီကနေ့ ချင်းနိုင်ငံရေး ပါတီတွေနဲ့ပညာရှင်များ လက်ခံအတည်ပြုထားတာ ချင်းလူမျိုး ၈ မျိုးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုး Race/Tribe မဟုတ်တဲ့ မျိုးနွယ်စု/ဆွေမျိုးစု Clan ၊ စကားဝဲအစု Dialect တွေကို ရောနှောပြထားတဲ့ ၅၃ မျိုးကို သရုပ်ခွဲလိုက်ရင် အခုလို တွေ့ရပါတယ်။
ဇိုမီး၊ ကူကီး၊ လိုင်မီး၊ မရာ၊ ချိုမီး၊ ခမီး၊ ရှိုမီးနှင့် မီဇိုတို့ကို လွှမ်းခြုံခေါ်သောအမည်
၁၀ ခေါနိုး၊ ဂန်တဲ့၊ ဂွေးတဲ၊ ငန်း၊ ဆီစာန်၊ ဆိုင်းဇန်၊ ဇို၊ တီးတိန်၊ တေဇန်၊ ဒင်မ် ၁ ဇိုမီးချင်း
၂ ခေါင်ဆိုင်၊ တာ့ဒိုး ၂ ကူးကီးချင်း
၁၅ ခွာဆင်းမ်၊ ခွန်လီ၊ ဆင်တန်၊ ဇာဟောင်၊ ဇိုဖေ၊ ဇန်ညှပ်၊ တပေါင်၊ တိုင်ချွန်း၊ တောရ်၊ မိအဲ၊ လင်တဲ၊ လောက်တူ၊ လိုင်၊ လိုင်ဇို၊ ဇိုတု့း ၃ လိုင်မီးချင်း
၂ မရာ၊ မတူ ၄ မရာ
၅ ဒိုင် (ယင်ဒူး)၊ မကန်း၊ မွင်း၊ အုပု၊ ရောင်တူ ၅ ချိုမီးချင်း
၇ ခမီ၊ အဝခမီ၊ ခေါင်စို၊ ပနန်း၊ လေးမြို၊ ဝါကင်းမ်၊ အနူး ၆ ခမီးချင်း(မြို)
၂ ဆလိုင်း၊ အရှို ၇ ရှိုမီးချင်း
၃ ကလင်ကော (လူရှိုင်း)၊ လူရှိုင်း (လူရှေ)၊ ဟွာလ်ငို ၈ မီဇိုချင်း (လူရှိုင်း)
၄ နာဂ၊ တန်ခူး၊ မာရင်၊ အနန်
၁ မေ့ထေး (ကသည်း) ၃ မဏိပူရ်
၁ လင်းဘု ၃ နီပေါ
၅၃ စုစုပေါင်း ၈+၃ စုစုပေါင်း
ကူကီး (သာဒိုး) ဟာ ရင်းမြစ်အားဖြင့် ဇိုမီးလူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ အခုတော့ သီးခြားလူမျိုးအဖြစ် ရပ်တည်ပါပြီ။ လိုင်မီး ရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ မရာ ဟာလည်း အခု သီးခြားလူမျိုးအဖြစ် ရပ်တည်နေပါပြီ။ နအဖဟာ ခမွီးနဲ့မြို ကို ရခိုင်လူမျိုး ထဲထည့်မထားရင် ချင်း ၅၅မျိုး ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ချင်းပုန်း၊ ချင်းဘုတ် စတဲ့နာမယ်ကွဲတွေ ထပ်ထည့်လိုက်ရင် နအဖရဲ့ ချင်းစာရင်းဟာ ၁ဝဝ နားကပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ နာဂလူမျိုးကိုတော့ ချင်းလူမျိုးထဲ သတ်မှတ်ထည့်သွင်းလို့ မရဘဲ သီးခြားမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတမျိုးအဖြစ် သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နအဖရဲ့ချင်းတွေလိုဘဲ နာဂထဲက ဆွေမျိုးစု၊ စကားဝဲအစုတွေက အနည်းဆုံး ၆၄ မျိုးရှိလို့ ချင်းထက်များပါတယ်။ နာဂလူမျိုးမှာ ပြည်နယ် မရှိလို့ ချင်းလို လူမျိုးအများကြီး ခွဲမပြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နို့မဟုတ်ရင် နအဖရဲ့ မြန်မာပြည် “တိုင်းရင်းသားအရေအတွက်” ၃ဝဝ ကျော်သွားနိုင်ပါတယ်။
၁ ဗမာ ၁ ဗမာ (ယော)
၂ ထားဝယ် ၂ ထားဝယ်
၅ ကဗိန်း ၃ ယဗိန်း
၆ ကဒူး ၄ ကဒူးကနန်း
၉ စုစုပေါင်း ၄+၂ စုစုပေါင်း
နအဖက ဗမာ (ခေါ်) မြန်မာလူမျိုးစုအရေအတွက်ကို နဝင်းကျေအောင် ၉ ခုပြထားပါတယ်။ ယော၊ ထားဝယ်နဲ့ ဘိတ် တို့ကို သီးခြားလူမျိုးတွေအဖြစ် ပြထားတယ်။ စကားဝဲ dialect အစုကွဲသာဖြစ်တယ်လို့ မနုဿဗေဒပညာရှင်များနဲ့ ဘာသာဗေဒပညာရှင်များ သတ်မှတ်ထားတာ အားလုံးအသိပါဘဲ။ အခုအချိန်ထိတော့ ဒီအစုတွေဟာ သီးခြားလူမျိုး သရုပ်လက္ခဏာနဲ့ ရပ်တည်ချင်စိတ်ပြင်းပြတာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မရှိသေးပါဘူး။ နောင်မှာတော့ ဘိတ်နဲ့ထားဝယ်ဟာ သီးခြား သရုပ်လက္ခဏာနဲ့ ရပ်တည်ချင် ရပ်တည်လာနိုင် ပါတယ်။ နအဖဟာ ရှမ်းပြည်က သီးခြားဗမာလူမျိုးစုအနွယ်ဝင် ဓနု၊ တောင်ရိုးနဲ့ အင်းသား ကိုတော့ ရှမ်းလူမျိုးထဲ ထည့်ထားပါတယ်။ ကဒူးနဲ့ကနန်းကိုလည်း ခွဲပြထားသလို ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် ထဲက ဖွန်းလူမျိုးနဲ့ တိဘက်-ဗမာ အနွယ်မဟုတ်တဲ့ ဆလုံတွေကို ဗမာလူမျိုးထဲ ထည့်ထားတာတွေဟာ မနုဿဗေဒအသိ နုံ့နဲ့ရာကျပါတယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲက နာဂတွေကျတော့ ချင်းလူမျိုးထဲ ထည့်ထားပေမဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ထဲက ကဒူး ကနန်းတွေကိုတော့ ဗမာလူမျိုးထဲ ထည့်ထားတယ်။
နအဖဟာ မွန် ကိုတော့ တမျိုးထဲပဲပြထားပြီး တခြားမွန်ခမာမျိုးနွယ်တွေဖြစ်တဲ့ ဝ၊ ပလောင်၊ ယင်းနက် ယင်းကျား စတာတွေကို ရှမ်းလူမျိုးတွေထဲထည့်ပြထားပါတယ်။
၁ မွန် ၁ မွန်
၁ စုစုပေါင်း ၁ စုစုပေါင်း
၁ ရခိုင် ၁ ရခိုင်
၂ ကမန် ၂ ကမန်
၄ ဒိုင်းနက် ၃ ဒိုင်းနက်
၅ မရာမာကြီး ၄ မရမာကြီး
၇ သက် ၅ သက်
၇ စုစုပေါင်း ၅ စုစုပေါင်း
ရခိုင် လူမျိုးကို ၇ မျိုးစာရင်းပြထားရာမှာ တကယ်တော့ ခမွီး နဲ့မြို (မရို) ဟာ ရခိုင်ပြည်မှာနေတဲ့ ခမီးချင်းတွေ ဖြစ်ပြီး နအဖရဲ့ ချင်း ၅၃ မျိုးဆိုတဲ့အထဲပါပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခမွီးနဲ့မြို ဟာ သီးခြားလူမျိုးနှစ်မျိုးမဟုတ်ဘဲ တမျိုး တည်းအောက်က မျိုးနွယ်ကွဲတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။
နအဖစာရင်းပါ ရှမ်း ၃၃ မျိုးကတော့ ရှမ်းတင်မကဘဲ ဗမာမျိုးနွယ်တွေ၊ ပအိုဝ်း လို တခြားတိဘက်ဗမာမျိုးနွယ်တွေ၊ မွန်ခမာမျိုးနွယ်တွေစသဖြင့် ရောထွေးနေပါတယ်။ ရှမ်းကြီးနဲ့ တိုင်းလုံ ဆိုတာ တခုတည်းဖြစ်ပြီး ရှမ်းကလေးနဲ့ တိုင်းလေ့ ဟာလည်း တမျိုးတည်းဖြစ်တယ်။ ခန္တီးရှမ်း နဲ့ တိုင်းလျမ် ကိုပြထားပေမဲ့ တိုင်းနူ (ရှမ်းတရုတ်)၊ တိုင်းလီ၊ တိုင်းလျန် (ရှမ်းနီ) နဲ့ ဒရယ် ကိုချန်ထားတယ်။ တိုင်း (ရှမ်း) လူမျိုးတွေဟာ သီးခြားလူမျိုးတွေအဖြစ် သရုပ်လက္ခဏာခံယူမလား၊ တိုင်းလူမျိုးကြီးထဲက မျိုးနွယ်ကွဲ၊ စကားဝဲ အစုကွဲတွေအဖြစ်သာ ခံယူမလား ဆိုတာတော့ ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရအုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်၊ စုံ၊ ဝ နဲ့ တိုင်းလွယ် တို့ဟာ တမျိုးတည်း ဖြစ်ပါတယ်။ (တိုင်းလွယ် ကိုတော့ သီးခြားမွန်ခမာလူမျိုးတခု အဖြစ် ယူလို့ရနိုင်တယ်။) ကွီ နဲ့ လားဟူ မကွာသလို ဖျင်နဲ့ အခါလည်း အတူတူပါဘဲ။ ပလေးနဲ့ပလောင် တမျိုးတည်း ဖြစ်သလို မြောင်ဇီး၊ ယအို (ယောင်) နဲ့ အိုက်ဆွယ် တမျိုးတည်းဖြစ်ကြပါတယ်။ နယ်ချင်းထိစပ်နေလို့ ယူနန်တရုတ် လူမျိုးကို (ယူနန်တရုတ် မဟုတ်ဘဲ မင်မင်းဆက် နောက်ဆုံးဘုရင်နဲ့အတူပြေးလာတဲ့ မြောက်ပိုင်းသား မန်ဒါရင်တရုတ် လို့လဲ တချို့သမိုင်းတွေမှာ ဆိုပါတယ်) ဗမာပြည်ရဲ့ တိုင်းရင်းသား ကိုးကန့်လူမျိုးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာတွေ့ရသလို ယွန်း (မြောက်ပိုင်းထိုင်း) လူမျိုး၊ ခမူ (လော) လူမျိုး၊ ရှမ်းကလေး (ဝါ) တိုင်းလေ့ (ထိုင်း)၊ တိုင်းလျမ် (ယူနန်) လူမျိုးတို့ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာတွေ့ရတယ်။ ချင်းပြည်ဘက်မှာလည်း ကသည်း (မဏိပူရ) လူမျိုး၊ လင်းဘု (နီပေါ) လူမျိုးတို့ကို တိုင်းရင်းသားသတ်မှတ်ထားပေမဲ့ အလားတူ ဗမာပြည်နယ်နိမိတ်ထဲ နေထိုင်နေတဲ့ တိုင်းလိ (ယူနန်)၊ ပသျှူး (မလေး)၊ တိဘက်၊ ဂေါ်ရခါး (နီပေါ)၊ စစ်တကောင်းဘင်္ဂါလီ (ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်) တို့ကိုတော့ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် ဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။
၃ ရှမ်း၊ ရှမ်းကြီး၊ တိုင်းလုံ ၁ တိုင်းလုံ (တိုင်းယိုင်)
၁ ဂုံ ၂ တိုင်းခွန် (ဂုံ)
၁ မောရှမ်း ၃ တိုင်းမော
၁ တိုင်းလျမ် ၄ တိုင်းလျမ် (ယူနန်)
၁ ခန္တီးရှမ်း ၅ တိုင်းခမ်းတီး (ကချင်)
၂ ရှမ်းကလေး၊ တိုင်းလေ့ ၆ တိုင်းနွဲ့ (ထိုင်း)
၁ ယွန်း ၇ တိုင်းယွန်း (ဇင်းမယ်ထိုင်း)
၂ ပလေး၊ ပလောင် ၈ ပလောင်
၃ ဝ၊ အင်၊ စုံ ၉ ဝ
၁ တိုင်းလွယ် ၁၀ တိုင်းလွယ် (ဝ)
၁ ဓနု ၁၁ ဓန
၁ တောင်ရိုး ၁၂ တောင်ရိုး
၁ ဓနော ၁၃ ဓနော
၂ လားဟူ၊ ကွီ ၁၄ လားဟူ
၂ ကော်၊ ဖျင် ၁၅ အခါ
၁ ခမူ ၁၆ ခမူ (လော)
၃ မြောင်ဇီး၊ ယောင်၊ အိုက်ဆွယ် ၁၇ မြောင်
၁ ကိုးကန့် ၁၈ ကိုးကန့် (တရုတ်)
၁ အင်းသား ၁၉ အင်းသား
၁ ပအိုဝ်း ၂၀ ပအိုဝ်း
၂ ယင်းကျား၊ ယင်းနက် ၂၁ ယင်း
၁ မိုင်းသာ ၂၂ မိုင်းသာ
၃၃ စုစုပေါင်း ၂၂ စုစုပေါင်း
ဒါကိုချုပ်ကြည့်လိုက်ရင် နအဖပြောတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅ မျိုးဆိုတာမှာ ၇၆ မျိုးဟာ စာရင်းထပ်နေတာ၊ လုပ်ကြံတည်ထွင်ထားတာဖြစ်နေပြီး (၅၉) မျိုးသာ တကယ်အမှန်အကန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ဗမာပြည်မှာ လူမျိုး ၅၉ မျိုးသာရှိတယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ထမန်၊ တိုင်းလျန်(ရှမ်းနီ)၊ ဒရယ်၊ ဗမာမူဆလင် (မြေဒူး၊ ဇေဒဘာရီ)၊ တို့နဲ့ နယ်စပ် ဟိုဘက် ဒီဘက်ခွနေလေ့ရှိတဲ့ တိဘက်၊ ဂေါ်ရခါး၊ တိုင်းလိ၊ တိုင်းနူ(ရှမ်းတရုတ်)၊ မလေး-ပသျှူး၊ စစ်တကောင်း သားဘင်္ဂါလီ တို့လို ဒီစာရင်းထဲမပါဘဲ ကျန်နေတဲ့လူမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ယဗိန်း၊ ဓနော၊ ဒရယ်၊ ထမန်၊ ဖွန်း၊ ခမူတို့ဟာ မျိုးတုံးလုဆဲဆဲ၊ သို့မဟုတ် လူဦးရေရာဂဏန်းလေးသာရှိတဲ့ လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သီးခြားလူမျိုးအဖြစ် အမှတ်လက္ခဏာသစ်ခံယူလိုတဲ့ သို့မဟုတ် မခံယူလိုတဲ့ မျိုးနွယ်ကွဲတွေ ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ရှမ်းလူမျိုးကွဲတွေထဲက သီးခြားလက္ခဏာအမှတ်အသား မခံယူလိုတာရှိရင် ၅၉ မျိုးထက် လျော့နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ဗမာပြည်ရဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအရေအတွက်ဟာ ၇ဝ မကျော်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နအဖဟာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအရေအတွက် ဆယ်ဂဏန်းမပြည့်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ် ထူထောင်မှာပါဘဲ။ နအဖ စကား၊ နအဖစာရင်းတွေဟာ ဘယ်လိုမှ စိတ်ချယုံကြည်စရာမရှိဘူး ဆိုတာရယ်၊ ကိုယ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံထဲက လူမျိုး တွေကိုတောင် မှန်မှန်ကန်ကန် စာရင်းကောက်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်း မရှိဘူးဆိုတာကိုတော့ ၁၃၅ မျိုးစာရင်းက သက်သေ ခံနေပါတယ်။